आइफाको विरोध किन ? (सम्पादकीय) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » आइफाको विरोध किन ? (सम्पादकीय)
आइफाको विरोध किन ? (सम्पादकीय)
SAHARA TIMES Tuesday, July 2, 20190No comments
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अपरिपक्क निर्णयका कारण अहिले विभिन्न निर्णय विवादमा पर्दै आएका छन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै विपक्षी दलहरुले सरकारको विरोधमा सडक तताएका छन् । सरकारको पछिल्लो सबभन्दा विवादस्पद निर्णय इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) हो ।
आइफा नेपालमा हुनुपर्छ भनि निर्णय सरकारले गरेको छ । तर त्यो विवादमा आएपछि सरकार पछाडि हट्ने संकेत देखाएको छ । यसको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ । यहाँसम्म कि सर्वसाधारणदेखि नेपाली कालाकारहरु समेत सडकमा आएका छन् । उहाँहरुले यसको विरोध बुझेर वा नबुझेर विरोध गरेको हो थाह छैन तर विरोधका तीनवटा कारण हुन् सक्छ ।
पहिलो कारण भारत हो । यो कार्यक्रम भारतको भएको हुनाले राष्ट्रवादीको नाममा यसको विरोध भइरहेको छ । यो विरोधमा के फाइदा के वेफाइदा हुन्छ भन्ने थाह छैन भारतको विरोध गर्नका लागि मात्र सडकमा आएको देखिन्छ । अर्को कारण इगो हो । विश्वमा परिचित यो कार्यक्रम नेपालमा हुन लागेको छ त्यसमा सबै नेपाली कालाकारहरुलाई उचित स्थान दिएको छैन ।
कार्यक्रममा सहभागी गराएको छैन त्यसले गर्दा इगो भएको छ र सडकमा ओर्लेर जर्वजस्ती विरोध गरेका छन् । नेपाली चलचित्रको क्षेत्र बलियो छैन । यहाँ भारतीय चलचित्रकै बाहुल्य छ । यस अवस्थामा भारतीय चलचित्र बजारकै प्रवद्र्धन हुने कुरालाई नकार्न सकिदैन । विगत तीन वर्षदेखि नेपालमा राज्यस्तरबाट प्रदान गरिने फिल्मी पुरस्कार प्रदान गरिएको छैन । यस अवस्थामा आइफा हुनुमा नेपाली कलाकार दुखी हुनु स्वभाविक हो । तर यिनै कारणले आइफा पनि हुनु हुँदैन भन्नु मुर्खता हो ।
तेस्रो कारण सरकार हो । विपक्षिले त्यसको फाइदा लिइरहेको छ । कार्यक्रमबाट फाइदा होस् वा वेफाइदा होस् तर विपक्षिले सरकारलाई गलाउनका लािग यसको विरोध चर्काएको हो । यी तीन कारणको मिश्रणले आइफा विवादमा आएको छ ।
सन् २००० देखि प्रारम्भ भएको यो आइफा सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्नु नै नेपालका लागि खुशीको कुरा हो । यसो भन्दा गलत नहोला कि नेपालको लागि यो सौभाग्य हो । आइफा नेपालमा हुने भनि निर्णय हुनु नेपालका लागि समृद्धिको एउटा पाइला हो ।
विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना भइसकेको आइफा नेपालमा गर्ने भनि आयोजकले निर्णय गर्नु भनेको नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यो २० औं ‘आइफा’ हो र यस कार्यक्रमको आयोजना विभिन्न मुलुकमा हुँदै आएकोमा यस वर्ष नेपालमा हुने भएको हो । बलिउडका कलाकारहरु सम्मिलित हुने यो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम हो । कार्यक्रममा झन्डै पाँचसय भन्दा भारतीय कलाकारको सहभागिता रहने अनुमान छ ।
यो स्तरको कार्यक्रम नेपालमा भयो भने पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास हुने नै भयो । तत्कालै नेपाली व्यवसायीहरुलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुनुको साथै नेपाललाई विश्वमा परिचय गराउन सकिन्छ । विश्वको ध्यान नेपालप्रति एकपटक फेरि आउनेछ । द्धन्दबाट तर्गिदै गरेको नेपालप्रति पुनः विश्वको विश्वास बढ्नेछ । नेपालमा द्धन्द छ भनि पर्यटकहरु अझै खुलेर नेपाल आउन चाहेको छैनन् । यदि यो स्तरको एउटा प्रोग्राम भयो भने सबैमा विश्वास बढ्नेछ र पर्यटकहरुमा वृद्धि हुनेछ ।
सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० शुरु गरेको छ त्यसमा त पक्कै पनि सहयोग पुर्याउँनेछ । सरकारले यस्ता कार्यक्रममा लगानी गरेपनि घाटा हुनेछैन । लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । तर सरकारले आयोजक संस्थाबाट सहमति गर्दा आर्थिक दायित्वको कुरा लगायतका विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि सम्झौता नेपालको हितमा नहोस् तर यो आइफा नेपालमा गर्दा वेश नै हुन्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा आइफाले उल्लेखनीय सहयोग पु¥याउनेछ र यो कार्यक्रममा सरकारको ढुकुटीबाट कुनै रकम खर्च हुनेछैन । यतिको स्पष्ट पार्दा पार्दै पनि राष्ट्रवादी भनाउँदाहरु त्यसको विरोध गरिरहेको छ । के भारतबाहेक अरु देशबाट नेपालमा आइफा जस्तै अर्को कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेको भए के त्यसको विरोध हुन्थ्यो त ? पक्कै पनि हुने थिएन । नेपालमा एकथरीलाई इण्डोफोयिबा लागेको छ । भारतको नाम जोडिने वित्तिकै त्यसको फाइदा बेफाइदा नहेरी आँखा चिम्लेर विरोध गर्न शुरु गर्छन्, त्यसैको उपज हो आइफाको विरोध ।